> Resource > Video > tirtiray Movie Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Movies masaxay
Sidee ayaan u soo kaban karto, tirtiray Movies?
Waxaan tirtiray dhammaan filimada aan la wareejin + tirtirto ee lama filaan ah. Waxay ahaayeen in ku dhow 30 GB ee filimada aan jeclaa. Waan u hadda ka qoomameyn. Fadlan iga caawiya inuu ka soo kabsado! Fikrado kasta?
Kuwa filimada tirtiray aan la tageen si joogto ah si dhab ah. Waxay kaliya noqon geli karin. Waxay weligiis la khasaarayaa marka xogta cusub overwrites meel ay loo isticmaalo in lagu helo. Taas macnaheedu waa in aad u soo kaban karto filimada aad tirtiray inta aad aan xogta cusubse waxaa lagu shubaa aad drive.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij soo kabashada dhinac saddexaad ah oo awood aad ka bogsato filimada fudayd, iyadoo aan loo eegayn filimada aad lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, weerarka virus, nidaamka shil ama sababo kale. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows computer / Mac, camera digital, qalab lagu kaydiyo dibadda, telefoonka gacanta, USB flash drive iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Version ayaa tijaabo ah Wondershare Data Recovery waa la heli karaa si aad u iskaan qalab aad si aad ku hubin kartaa in laga helo filimada tahay waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hadda.
Qabtaan tirtiray Movie Recovery in 3 Talaabooyinka
Halkan aynu soo kabsado filimada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad soo kaban karto filimada in talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Daahfurka barnaamijka iyo dooran hab-kabashada
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery, waxaad arki doontaa Window ah sida hoos ku soo bandhigay. Waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado filimada tirtiray, ha isku dayno "lumay Recovery File" hab wada.
Fiiro gaar ah: Labada kale hababka soo kabashada waa mid waxtar leh aad, laakiin waxay qaataan waqti dheer si scan mana bixiyaan magaca file asalka ah in natiijada baaritaanka electaroonika ah.
Tallaabada 2 Sawirka drive adag ama folder khaas ah meesha aad tirtiray filimada aad
Barnaamijku wuxuu ku qor doonaa oo dhan qoruhu iyo aaladaha kaydinta xiran in your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya dooro mid aad rabto in aad dib u soo ceshano filimada ka oo guji "bilow" in iskaan u filimada tirtiray. Waxa kale oo aad "Enable Deep Scan" kartaa natiijo iskaanka fiican.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado filimada tirtiray ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubi in qalabka in si wanaagsan loo xiran karo your computer.
Tallaabada magacyada 3 Check filim iyo soo kabsado filimada eegista
Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa in qaybaha iyo waddooyinkiisa. Waxaad ka raadin kartaa filimada aad magac in bar raadinta. Marka hubinta filimada aad rabto in la soo celiyo, waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadiyo filimada soo kabsaday dib ay goobta asalka ah, ama ay la overwritten doonaa.
Sida loo gaaro Hard Drive Data Recovery u Win iyo Mac OS X
Sawir Talooyin: Sida loo agtaagan Pictures sida Super Star ah (Gabdhaha)
Sida loo sameeyo MOV (Quicktime) yar
Sida loo ka Shabakadaha Qor Voice Si fudud